A-1 ~ Woga Arch Rubber Exp ...
A-4 ~ Spool Rudzi Rubber Expa ...
Iyo imwe chete-arch chigadzirwa chinogona kuderedza vibrate uye ruzha, iyo inogadzirisawo axial / lateral / angular kufamba / eccentric matambudziko. Kusimbiswazve musana wemabhero neNylon tambo uye kumatare ese ari maviri akaomeswa simbi waya mhete. Iwo anodzika simbi masimbi ari kuumbwa zvinoenderana neDIN, ANSI, BS, JIS uye mamwe maitiro. Kana iyo yekudzvanya kwepombi yakanyanya, masimba akasimbiswa anofanirwa kuunganidzwa pamwe chete ne flanges.
A-9 ~ Zvimwe Zvigadzirwa
Rubber gasket ine mafuta kuramba, asidhi uye alkali kuramba, kutonhora uye kupisa kuramba, kuramba kukwegura uye zvimwe zvinhu. Zvichibva pachinangwa chakasiyana chekushandisa, izvo zvinyorwa zvebhuruu gasket zvakasiyana. Isu tinokwanisa kugadzira magasi mu EPDM, Buna, yerudzi rwechisikigo. Kana zvakakosha zvemidziyo zvinodiwa, tinogona kuita zvinodiwa.
Iwo elastomers anounganidzwa neiyo mating flanges, aine akasiyana miedzo uye dzakasiyana kudzvanywa. Dzimwe nguva, vatengi vanoda kuti tivatengere, zvinotumirwa pamwe chete nemajoini majoini.
Mubatanidzwa wakabatiswa unoshandiswa Kana hukama hwehupfumi hwakarongedzwa pombi ichidikanwa, pamusoro pemubatanidzwa unowanikwa zvese zvinopisa-dip galvanizing uye electroplating. Mhedziso idzi mbiri dzakapihwa chibvumirano chesimbi chinobatana neyevakadzi tambo BS kana ANSI.
Iyo spool mhando rubhajo yakasanganiswa yakaumbwa mhando, ine simbi collar yakasimbiswa pamutsipa wemuviri. Iyo ST stype inoshandisa mwenje inochengetedza mhete kutsigira yakasanganiswa flange. STF izere arch, iine makumi mashanu muzana muzana yeIN inobvumidzwa kufamba, asi ine 4 nguva dzematanho pamitero pane hollow arch.
Wide arch system ndiyo yakaumbirwa yekuwedzera inosanganisirwa, iine mubatanidzwa flange uye isina kusimbiswa kwesimbi pamutsipa wemuviri. Wide arch inobvumira kufamba kwakakura uye yakadzika mashure mareti achifananidza neafa fomu. WA uye WAF inoshandiswa kwehupfumi hupamhi hweArch rubhu hwekuwedzera. WAF izere arch, iine makumi mashanu muzana ye WA inobvumirwa kufamba, asi ine 4 times chitubu mareti kupfuura yakafara arch.
Zvigadzirwa zviviri-arch zvinoshandiswa panoda kufambiswa kwakawanda. Kana iyo yekudzvanya kwepombi yakanyanya, masimba akasimbiswa anofanirwa kuunganidzwa pamwe chete ne flanges. Kusimbiswazve musana wemabhero neNylon tambo uye kumatare ese ari maviri akaomeswa simbi waya mhete. Iwo anodzika simbi masimbi ari kuumbwa zvinoenderana neDIN, ANSI, BS, JIS uye mamwe maitiro.